FreedomEV, yakavhurwa sosi purojekiti iyo inowedzera maficha kune Tesla mota | Linux Vakapindwa muropa
FreedomEV, yakavhurwa sosi purojekiti iyo inowedzera maficha kune Tesla mota
Jasper nuyens, pamwe neboka revabiridzi vanozvidaidza kuti "Tesla Pirates," Ini ndinotora mukana wegore rino weFOSDEM chiitiko kuratidza chirongwa chayo chekutanga, dit-il, simba rese remotokari dzeTesla.
FOSDEM chiitiko chemahara chinotendera vanogadzira software kusangana, kufunga, uye kubatana. Gore rega rega muBrussels inounza pamwechete zviuru zvemahara uye zvakavhurika sosi software vanogadzira kubva kumativi ese epasi.
1 Pfungwa iyi yakauya sei?
1.1 FreedomEV, chirongwa chine tarisiro dzakawanda
1.2 Nezve ma modhi maviri eRusunungukoEV
2 Chii chinofungwa naTesla nezvekugadzirisa zvigadzirwa zvaro?
Pfungwa iyi yakauya sei?
Jasper Nuyens ndiye Managing Director weLinux Belgium, kambani inopa Linux kubvunza, kudzidzisa uye nerutsigiro masevhisi kune mamwe maLinux-based makambani nenzira yehunyanzvi mune mamiriro eeseva uye yakamisikidzwa Linux.
Mushure mekuwana Tesla X gore rapfuura, munhu wacho akapinda mairi kuti agadzirise zvimwe zvinhu zvemota uye nekuwedzera zvimwe zvinhu.
Aive akavaka Raspberry Pi mumota, aine yake yega internet link. Iyo Linux nyanzvi yakanga yagadzirawo zvimwe zvakawandisa zvikanganiso musystem software, saka zvaive nyore kusarudzika kana Tesla akatora mamwe matanho.
Nekudaro, nekuda kweshanduko idzi, Nuyens aive nemikana mitsva yemotokari yemagetsi kuwedzera zvimwe zvinhu.
Mushure meizvi, mubiridzi akaronga chirongwa chekutanga software yemagetsi yemagetsi.
FreedomEV, chirongwa chine tarisiro dzakawanda
Iyo purojekiti FreedomEV inovavarira kukupa iwe izere kutonga pamusoro pako wega mota. Nezve kuchengetedzeka kwayo uye zvizere mabasa uye kugona.
Izvo ramangwana mikana hariperi. Isu tinoongorora zvatiri kuita izvi, nei uye chii chinogoneka.
Iye zvino, inongotsigira Tesla Model S uye X neARM MCUAsi urikutsvaga here kuwedzera rutsigiro rwemotokari kuisa Intel-based MCUs uye Tesla Model 3 uye pamwe nevamwe vagadziri futi?
“Mota chimwe chezvishandiso zvekupedzisira zvinoshandiswa izvo zvichiri kungoita seanalogog.
Izvi zviri kuchinja, mota dziri kupinda munyika yedu yedhijitari, iyo yatinodzora. Ivo vanogara vari online, vanodzorwa nemakomputa.
Kune vanhu vazhinji, mota mucherechedzo werusununguko. Zvakadaro, hapana vimbiso yekuti ramangwana remotokari dzedu dzemagetsi richava remahara. «
Mukana wekuona kuti mota dzemunguva yemberi dzave uye dzichiramba dzakasununguka iyezvino, ”akadaro FOSDEM maikorofoni.
Yake yeRusunungukoEV chirongwa chinoita zvese kubva kune imwe kiyi, ikozvino, anovimbisa.
Anobira ine zvakawanda maficha mune yako FreedomEV chirongwa, kusanganisira imwe inonzi "Romantic Mode" uye imwe yacho "Yakavanzika Mamiriro."
Nezve ma modhi maviri eRusunungukoEV
Akagadzira yekutanga modhi, ndiko kuti, iyo yerudo modhi kuratidza iwo mameseji ari pakati pekoni uye inodzokorora iwo iwo mamwe mameseji kuburikidza nematauri emota.
Imwe nzira, zvakavanzika maitiro, inonyanya kukosheswa nevamwe vanetiweki vane yavo Tesla, vanoiwana ichifadza kwazvo.
Mudziviriri wenyika yemahara yekomputa, anopa iyi yechipiri modhi se yakasarudzika nzira yekutyaira iyo mota yako isingazokwanisa kunyoresa chinzvimbo chako, kana kuburitsa ruzivo rwekugara kwako kuburikidza neWi-Fi kana 4G, kana chero imwe nzira.
Kwaari, iyi modhi chinhu chinochengetedza kuvanzika kwemuridzi wemota yeTesla.
"Chinhu chakakosha cherusununguko muRusunungukoEV chinoita kunge ndechekuti iwe unofanirwa kugona kutyaira kumwe kunhu pasina kurasikirwa neyakavanzika yako yakawanda," anodaro achipembedza kugadzira iyi modhi.
Zvimwe zvinhu zvaakataura nezvazvo zvinowanikwa muvhidhiyo yekuenda kwake kumusangano weFOSDEM.
Chii chinofungwa naTesla nezvekugadzirisa zvigadzirwa zvaro?
Chaanoziva ndechekuti imba yemota ye Tesla anomuperekedza mukutanga kwake. Funga kuti pamwe chete, vabiridzi vaTesla naTesla vanozoita kuti mota dzeichi zita dziwedzere.
Tesla achabvuma here kushanda naJasper Nuyens kugadzirisa mota dzayo dzemagetsi?
Sekureva kwake, izvi zvataurwa pamusoro zvinoda kuti zvibatanidzwe nemotokari pamwe nevamwe kuti vabvumire varidzi vemota yeTesla kunakidzwa neruzivo rwekunze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » FreedomEV, yakavhurwa sosi purojekiti iyo inowedzera maficha kune Tesla mota
Zvakafanana nechamamaboard chinhu. Kwamunoisa mahara kunofanirwa kureva kune yemahara. RMS yakatotaura kare kuti inyaya yerusununguko, kwete mutengo. Ardor semuenzaniso inotengesa software yayo, asi ndeye mahara.